मिलेर नेपाल बनाउन अमेरिका छाडेकी हुँ (भिडियोसहित) | नेपाल आज
मिलेर नेपाल बनाउन अमेरिका छाडेकी हुँ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सभाका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं. १ (क) मा समीक्षा बास्कोटा उम्मेदवार छिन् । नेपाल आज फाउन्डेसनले शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित बानेश्वर बैंक्वेटमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा समीक्षाले राखेको धारणा निम्नानुसार छ–
‘म समीक्षा बास्कोटा । मैले काठमाडौं स्कुल अफ लबाट ग्राजुएट गरेँ २००७ मा । त्यसपछि मैले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा गएर मास्टर्स गरेँ । त्यसको केही समय त्यहीँ प्राक्टिस गरेँ । २०१० मा नेपाल फर्केँ । नेपाल फर्किँदा धेरैले मलाई ‘समीक्षाले बुद्धी बिगारी नेपाल आइ’ भने । उनीहरुको बुझाइ थियो कि समीक्षाले अमेरिकामा केही गर्न नसकेर नेपाल फर्केकी हो । तर म त्यो बेला पनि नेपालमै केही गर्छु भन्ने सोचेर फर्केकी थिएँ । यहाँ कुनै अवसर नदेख्नेहरुका लागि मेरो पुनरागमन स्वभाविक थिएन । म कुनै पनि पेशा व्यवसायमा रहेर देशका लागि जति गर्न सक्छु, त्यो भन्दा धेरै राजनीति गरेर गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो । म विवेकशील साझासँग जोडिन पुगेँ । उहाँहरुले मलाई उम्मेदवार बनाउनु भयो । जसका कारण अहिले म तपाईहरु अगाडि आइपुगेकी छु ।
हामी हरेक पटक मतदान गर्छौं । अवस्था फेरिएला भन्ने आशा गर्छौं । तर हामीले सरकारबाट पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको गणस्तर कहिले पनि फेरिएनन् झन कमजोर हँुदै गए । अनि मनमा प्रश्न आयो, उसोभए हामी भोट किन गरिरहेका छौं त ?
मैले जहिले पनि भोट हालेर पठाएँ, र अपेक्षा गरेँ कि उहाँहरुले देशको मुहार फेर्नुहोला, देशलाई समृद्धितर्फ लैजानु होला । तर त्यस्तो कहिले भएन । हामीले मत दियौं, तर त्यसको बदलामा नेताहरुले हामीलाई केही दिनु भएन । त्यसको बदलमा उहाँहरुले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, लुटतन्त्र मच्चाउनु भयो ।
हामीले खाने तरकारी, हामीले लगाउने कपडा, प्रयोग गर्ने मोटरगाडीदेखि हरेक कुरामा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मिसिएर आयो । यो किन भयो, कसरी भयो ? हामीले कहिले पनि प्रश्न गरेनौं ।
हामीलाई उहाँहरुले जनता भनिरहनु भयो । हामीमाथि अत्याचार गरिरहनु भयो । यदि म पनि उहाँहरुले भनेको जनताभित्र पर्छूभने मेरा पनि त गुनासा थिए, मेरा पनि त दुःखका निवेदन दिए । उहाँहरुले म जस्ता जनताको कुरा कहिले पनि समेट्नु भएन । उहाँहरुले आफन्त, कार्यकर्ता र आसेपासेको गुनासो सम्बोधन गरिदिनु भयो ।
विवेकशील साझा पार्टी नै हो अहिले जसले हरेक नेपालीको घर घरको समस्या र समाधानबारे आवाज उठाइरहेको छ । यो पार्टीले आफन्त, कार्यकर्ता र आसेपासेको होइन आम जनताको आवाज उठाइरहेको छ ।
ठूला पार्टीहरुले जनताका लागि यो गर्यौं, त्यो गर्यौं भन्छन् । तर उनीहरुले भन्ने गरेको जनताको परिभाषा भित्र म र म जस्ता धेरै नागरिकहरु पर्दैनन् । हामी विवेकशील साझा पार्टीको परिभाषामा सबै नेपाली नागरिकहरु समान छन् । यसकारण हाम्रो आग्रह यो हो कि हामी कतै काम नपाएर राजनीतिमा आएका होइनौं । हामी सबै सक्षम छौं । हामी सुशासन दिन सक्षम छौं । यसकारण हामी आग्रह गर्छौं कि हामीलाई साथ दिनुहोस् ।’